Singapore : Loha Sola Ho Fanairana Hanohanana Ireo Ankizy Mararin’ny Homamiadana · Global Voices teny Malagasy
Singapore : Loha Sola Ho Fanairana Hanohanana Ireo Ankizy Mararin'ny Homamiadana
Voadika ny 25 Aogositra 2013 4:28 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, polski, فارسی, Español, македонски, English
Natomboky ny Fikambanana Miahy Ankizy tratry ny Homamiadana tamin'ny 2003, ny Hair for Hope ( volo ho an'ny fanantenana), hetsika iray fanasolàna ny loha any Singapore mba hanangonam-bola sy hanentanana momba ny homamiadana mpahazo ankizy. Ireto ambany ireto ny tanjona :
- Fampahafantarana ny momba ny homamiadana mpahazo ankizy any Singapore
– Aseho amin'ireo ankizy mararin'ny homamiadana sy ny ray aman-drenin'izy ireo fa tsy miady irery amin'ny homamiadana izy ireo
– Lazaina amin'ireo ankizy mararin'ny homamiadana fa tsy mampaninona ny sola
– Manangom-bola hanampiana ireo ankizy mararin'ny homamiadana sy ny ray aman-drenin'izy ireo
– Manangana vondrom-piarahamonina mpanohana ireo ankizy mararin'ny homamiadana sy ny ray aman-drenin'izy ireo
“Mampiseho ny fahafantaran'ny olona iray ny zava-tsarotra sedrain'ny ankizy mararin'ny homamiadana ” ny loha sola. 9 fotsiny ireo nanolo-tena tamin'ny 2003 fa naherin'ny 6.000 kosa ny mpandray anjara tamin'ny 2012.
I Kelvin Wee, mpandray anjara vaovao, manazava ny antony nandraisany anjara tamin'ilay hetsika :
Tsy fanamelohana ho faty ny homamiadana ary afaka mandray anjara bitika isika hanohanana io hetsika io. Maro be ireo ankizy mila ny fanampiantsika ary afaka manao zavatra miavaka isika.
Efa nandray anjara tamin'io fanentanana io hatramin'ny fito taona lasa i Patrick Koh :
Mahalala olona maro mararin'ny homamiadana ary manaraka fitsaboana aho. Fa tsy ny rehetra no nihintsam-bolo. Fa ny azo antoka dia mila fanampiana ara-bola izy ireo satria lafo ny saram-pitsaboana. Manasola ny lohako aho mba hanehoana amin'ireo ankizy fa tsy mampaninona ny sola. Tsy misy zavatra ratsy. Manao sola ihany koa aho ho fanomezana hanampiana ny tohana ara-bola ho an'ireo ankizy ireo sy ny fianakavian'izy ireo. Nararin'ny homamiadana efa naharitra taona maro ny ray aman-dreniko tany aloha tany, ary misaotra an'ANDRIAMANITRA fa voatsabo izy ireo.
Ireto misy sary vitsivitsy momba ny hetsika fanasolàna loha tamin'ny volana lasa :
Sary avy amin'ny pejy Facebook-n'ny Hair for Hope
Fa nisy fifanolanana kely taorian'ilay hetsika, noteren'ny talen'ny sekoly hanao solovolo ao anatin'ny faritry ny sekoly ireo mpianatra zazavavy izay nanasola ny lohany. Naverin'ilay tale ny lalànan'ny sekoly fa tsy azo atao ny manao fomba fibango volo ” punk, tsy araka ny maha-vehivavy na volo misavoritaka.”
Nasain'i Alfred Dodwell hijery indray ireo politika izay mametra ny fahalalahan'ny fanehoan-kevitra ireo talen'ny sekoly :
Tsy malalaka amin'ny fanehoany ny heviny amin'ny alàlan'ny fanasolàny ny lohany ve ny Singaporiana ? Tsy miantsy misy fandraràna koa ve amin'izany ? Moa ve misy fiantraikany ratsy amin'ireo mpianatra sasany ny tanora sola na mandoko volo?
Angamba fotoana izao ho an'ny minisitry ny fampianarana hamerenany hijery ny havesa-danjan'ny fanamiana mitovy ary hamela ireo mpianatra hanana ny fanehoan-keviny amin'ny fomba fiakanjony sy ny fihogony ny volony.
Nanoratra taratasy misokatra ho an'ny minisitry fampianarana momba io olana io i Stefanie Yuen-thio :
Andriamatoa Minisitra, manoratra aminao ny fitaintainako mikasika ny rafi-pampianarantsika aho. Manahy aho satria io endrika fifanahafan'ny lalàna teknokraty io no ho fomba fisainan'ireo mpanabe eto amintsika. Manantena aho fa zavatra miserana ihany izany fa tsy endrika maneho ny rafi-pampianarantsika.
Fa nisy olona iray tsy nitonona anarana nilaza mazava fa nanome toky ireo ankizivavy fa hitondra solovolo mialoha ny fanoloran-tena amin'io hetsika io :
Ny fanomezan-toky dia fanomezan-toky. Inona no soatoavina omena ny taranaka raha toa ka misy iray tsy mitana ny teny nomeny satria ny iray mahatsapa fa mety ny nataony ? Androany, ny teny nomena no tsy hajaina, ahoana izany raha rahampitso ny lalàna no tsy arahana ?
Notsikerain'i Grace Chua ny fihetsik'ireo talen'ny sekoly :
Ny Sola ve – PUNK? SLOPPY (MIKOROTAM-BOLO)? ary iza no hilaza hoe inona no “tsy araka ny maha-vehivavy” ?
Na dia atao hoe mandika ny lalànan'ny fomba fihogo “tsy araka ny maha-vehivavy” aza izy ireo, tsy ho afa-tsiny ve ianao raha toa ka zavatra tsara no hanaovana azy?
Mba marina e, manehoa fileferana. Henjana ny lalàna saingy tsy toy izany ny fisainantsika.
Nankasitraka ireo rehetra nandray anjara tamin'ny hetsika Hair for Hope i BlackValkyrie7:
Mendri-panajàna sy fankasitrahana ireo rehetra ( indrindra ny ankizivavy) nanasola ny lohany tamin'iny hetsika iny. Aoka isika tsy hiolankolaka… tsy ny olona rehetra no afaka nandray anjara tamin'iny hetsika goavana iny. Raha toa ka nanan-tsafidy aho dia tsy nandray anjara tamin-javatra tahaka ireny velively. Azoko tsara ny fiferetana aina amin'ny fihintsanam-bolo satria efa niaina izany aho taloha. Izany no hahatsapako fa tena feno fahasahiana sy tso-po ireto mpandray anjara ireto. Zvatra izay tsy azon'ny olon-drehetra atao.
Fankasitrahana ho an'ireo nandray anjara.